Nke a bụ a 5 ukwu na 10 paylines free spins slot machine game. Ọ nwere Chinese akụkọ ifo isiokwu lekwasịrị anya a mythical efe efe dragon. Nke a oghere bụ ihe niile banyere free spins na anụ re-atụ ogho feature. N'ịbụ a anya mara mma oghere na-akpali atụmatụ a oghere bụ zuru juru n'ọnụ na-emeso.
Banyere Ndị Mmepe nke nwanna Long Ohere mepere
Nke a kediegwu oghere e mepụtara site a obere software na-emepe emepe ụlọ ọrụ Games ụlọ nyocha. hiwere na 2008 a ụlọ ọrụ specializes na i-Gaming. They have been developing free spins slot machine game from 2013 na-eme a dị ịrịba ama ọganihu. Ha na-arụsi ọrụ ike na-emepe emepe egwuregwu n'ihi na ọtụtụ nnukwu aha na azụmahịa.
The akụkọ ifo isiokwu dabeere na a na-efe efe dragon mara mma kere. The ndabere jupụtara udara osisi na soundtrack bụ nnọọ izuike. Because this free spins slot machine game has a mythological theme the symbols are bonsai trees, pebbles, flowers, ugwu, chaplet na pagodas.
The ọhịa akara bụ dragọn ahụ na naanị ala on n'etiti atọ na-esi anwụde nke ahụ bụ 2,3&4. Ọ nwere ike arụchiteere nile akara ma e wezụga ikposa nke bụ a phoenix. The bonus atụmatụ na-agụnye:
Free spins- mgbe ị na adaa atọ phoenixes on n'etiti 3 -esi anwụde nke a mma na-triggered. Ị ga-ọdịda 15 free spins n'oge v nke Enwee Mmeri a ga-okpukpu abụọ. Ọ bụrụ na ị na adaa 3 ma ọ bụ karịa n'ime ndị a chụsasịrị n'oge free spins, a ọhịa l re- atụ ogho nwere ike ime na ndị ọzọ spins nwere ike triggered site ọdịda karịa atọ chụsasịa.
Ịmụba Wild Jụrụ- Oge ọ bụla anụ egosi na-esi anwụde nke a mma na-triggered. Onye ọ bụla ukwu nwere anụ akara ga-akwụsị, ọhịa akara ga-imeju niile ọnọdụ. All ndị Enwee Mmeri a ga-akwụ na ị ga-enweta a free atụ ogho. Ọ bụrụ na ị na adaa a ọhịa n'oge na-aga n'ihu re-spins, a ga-ịkpalite feature ọzọ.
Nzọ opekempe size bụ 10p na kacha nzọ size bụ £ 250. This free spins slot machine game can be played on various platforms including your laptops, mbadamba na gị mobiles.
The mara mma ndịna-emeputa nke a oghere ga-afụ uche gị. Na ọ bụ ezie na nke a oghere nwere ike anya atụrụ ndụ gị, ya atụmatụ na-enthralling. This free spins slot machine game is all about re-spins and you will get lots of them. Egwuregwu a nwere a visual mkpesa na ihe ịtụnanya gameplay. Ihe niile n'otu oghere egwuregwu-eme ka ọ bara uru niile oge gị na ego.